Cabbirka tamarta korontada ee baabuurta konfur Afrika
Cabbirka tamarta korantada ee baabuurta konfur Afrika.
Waxaan qiimeyneynaa fikradda matoorada gubashada gudaha ee korontadu kor u dhaaftay, halkaas oo charger-gu, oo ka kooban kombaresarada iyo matoor koronto, uu ka soo jiidanayo awoodda korantada kaydiyaha (bateriga ama awoodda sare). Gaar ahaan, waxaanu baadhnaa xaaladda dhimista mishiinka, iyada oo la bixinayo dalabaadka awoodda sare iyada oo la kordhinayo. Isla mar ahaantaana, waxaan raadineynaa cabbirka ugu wanaagsan ee bixiya awood koronto iyo tamar ku filan oo lagu socodsiiyo charger-ga weyn, sida in baabuurku awood u yeesho inuu keeno waxqabadka looga baahan yahay wareegga wadista oo ka dhigan isticmaalka maalinlaha ah ee baabuurka. Waxaan bixinaa tillaabooyinka qaabeynta convex ee u qaabeeya dhibaatada sidii barnaamij koobid nidaam labaad ah kaas oo aan bixinaynin oo keliya matoorka ugu fiican iyo cabbirka bakhaarka, laakiin sidoo kale siiya kantaroolka ugu habboon iyo jaangooyooyinka gobolka ee istiraatiijiyadda xulashada qalabka la bixiyay. Ugu dambayntii, waxaanu bixinaa kiis daraasad ku saabsan cabbiridda injiinka iyo korantada kaydiyaha ee qiimaynta awoodda kombaresarada ee kala duwan.
Baabuurka saddexda lug leh, oo caadi ahaan loo yaqaan "auto-rickshaw" oo leh batrool afar-stroke ah, LPG ama CNG waa mid ka mid ah hababka ugu caansan uguna jaban ee gaadiidka (kireysiga) ee magaalooyinka Hindiya. Waa baabuur yar, aad loo maroorsan karo oo ku habboon jidadka cidhiidhiga ah iyo taraafikada ee magaalooyinka Hindiya. Baabuurta korantada iyo kuwa isku-dhafan ayaa si gaar ah ugu habboon isticmaalka magaalooyinka maadaama gaadiidka magaalada inta badan lagu garto masaafada darawalnimada gaaban oo gaaban, baahida koronto ee joogtada ah oo hooseeysa, waqtiyo shaqo-la'aaneed oo dheer iyo helitaan sare oo tamar dib u soo celinaysa. Cabbirka tamarta korantada ee baabuurta konfur Afrika.Sifooyinkan, marka si taxadar leh loogu daro habka naqshadaynta, waxay abuuraan fursado qiimo leh oo lagu horumarinayo hababka kicinta baabuurta ee nadiifka ah, waxtarka leh iyo qiimaha waxtarka leh. Sheeko cusub, qiimo jaban, sariir tijaabo ah oo lagu tijaabinayo hababka kicinta isku-dhafka ah ee xaafadaha magaalooyinka ayaa la sameeyay oo lagu soo bandhigay shaqadan. Ujeedada ugu weyn ee shaqadan waa in la barto waxqabadka isku-dhafka isku midka ah ee isku-dhafka ah ee leh mashiinka DC hub iyo mishiinka IC.
Codsiga hagaajinta naqshadaynta qaybaha badan waxay inta badan ku kooban tahay nidaamyada laba-edbinta sida dhibaatooyinka isdhexgalka qaabdhismeedka dareeraha. Qaababka daacadnimada sare ee saddexda qaybood ee ku lug leh naqshadaha korantada-kulka-qaabaynta waa naadir. Halkan, hagaajinta farsamooyinka badan ee naqshadaynta noocan oo kale ah ayaa la soo bandhigay. Qalabku wuxuu ka kooban yahay xudunta birta ee C-qaabaysan iyo hal gariirad. Dhibaatadu waxay ku burburtay iyadoo la isticmaalayo qaab-dhismeed macquul ah oo kala duwanaansho ah. Falanqaynta maaddooyinka kala duwan waxay ku lug leeyihiin mesh curiye kaliya oo saddex-cabbir ah oo loogu talagalay korantada aan toosnayn ee ku-meel-gaadhka ah, kulaylka aan toosnayn, iyo moodooyinka qaab-dhismeedka toosan. Inta lagu jiro dib-u-eegis kasta oo kala duwanaansho badan, meshku si toos ah ayuu u qaabaysan yahay. Algorithm hagaajinta gradient ku salaysan oo ay weheliso nidaam bilow badan ayaa lagu dabaqaa dhibaatada yaraynta tirada xaddidan. Suurtogalnimada edbinta-badan waxaa lagu hubiyaa isku-xidhka halbeegyo isku-xidhan ie
Shaxan dhowr ah ayaa lagu soo bandhigay kuwaas oo bixinaya xogta ku saabsan dhoofinta iyo soo dejinta suuqa kala beddelashada (AC) matoorada korontada oo wax soo saarkoodu ka badan yahay 37.5 watts ee Koonfur Afrika 2011 ee XNUMX oo ay ku jiraan mid ka mid ah qaab-dhismeedka tartanka dibadda soo dejinta ee la sheegay in matoorada koronto ee dalka la keeno. Mid kale oo la sheegay in matoorada Korontada laga dhoofiyay dalka, iyo mid la sheegay in matoorada Korontada laga keenay Koonfur Afrika oo laga keenay dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin Singapore, Denmark, iyo Spain.
Istaraatiijiyada la tixgelinayo waxay ku saleysan tahay Stochastic Dynamic Programming. Sharciga xakamaynta (go'aaminta kala qaybsanaanta matoorka iyo matoorka) waxaa lagu xisaabiyaa meel ka baxsan khadka iyadoo la xalinayo dhibaatada kor u qaadida horizon aan dhamaadka lahayn. Waxay keentaa shaqo kontorool jawaab celin dawladeed oo aan kala go' lahayn oo ah dardargelinta iyo xawaaraha gaadhiga, xaalada batteriga iyo xaalada injiinka. Xakamayntan ayaa marka hore lagu ansaxiyay jilid ka dibna lagu hirgeliyay qaybta kontoroolka elegtarooniga ah ee baabuurka. Natiijooyinka tijaabada ahi waxay muujinayaan hab-dhaqanka wanaagsan ee istiraatiijiyadda xakamaynta. Inta lagu jiro 35 km ee dariiqa magaalo, istaraatijiyadu waxay ku guulaysataa nidaaminta xaalada batteriga waxayna si cadaalad ah u isticmaashaa tareenka korontada.
Wareejinta tignoolajiyada iyo la wareegida ayaa noqotay doodo kulul iyo arrimo siyaasadeed oo muran badan dhaliyay. Baaritaanka siyaasadda Mareykanka ee ku aaddan wareejinta teknoolojiyadda badda ee Brazil waxay kor u qaadaysaa su'aalaha amniga qaranka Mareykanka iyo ansaxnimada codsiyada Brazil. Cilmi-baadhistu waxay daaha ka qaadaysaa taariikhda ku-tiirsanaanta Maraykanka Cabbirka tamarta korantada ee baabuurta konfur Afrika.Ciidamada badda iyo in warshadaha badda ee Brazil ay sidoo kale ka dambeeyaan dhigooda militariga ee wax soo saarka gudaha, iibsashada inta badan qalabka badda ee dibadda. Warqadani waxay eegaysaa ku-tiirsanaanta Ciidanka Badda Brazil ee maraakiibta shisheeye waxayna baaraan dhibaatooyinka wax soo saarka badda. Xidhiidhka Maraykanka/Brazil waxa uu daaha ka qaaday iskaashi lagu xoojin karo annaga oo ka dhigaya siyaasadaha wareejinta tignoolajiyada mid dabacsan.
Matoorada Hubka ayaa had iyo jeer loo tixgeliyey inay yihiin kicinta baabuurta korontada, laakiin aan si weyn loo isticmaalin sababo kala duwan oo xun. Mid ka mid ah kuwan waa hubanti la'aanta saameynta miisaanka giraangiraha lagu daray uu ku leeyahay xasilloonida, badbaadada iyo raaxada gaariga. Warqadan, falanqaynta soo noqnoqda iyo sidoo kale jilitaanka nidaamka ayaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo qaab fudud oo ka dhigan nidaamka hakinta baabuurta iyo taayirrada. Natiijooyinka gaadhiga xuddunta lagu wado waxa la barbar dhigayaa gaadhiga caadiga ah. Waxaa la muujiyay in miisaanka giraangiraha lagu daray uusan saameyn ku yeelanayn xasilloonida gaariga iyo in jawaabta soo noqnoqda ay ku dhex jirto heerka raaxada ee la aqbalay.
Gaadiidka dhuumaha qaada ayaa ah mid gaar ah oo ka mid ah hababka gaadiidka, iyadoo tuubada, oo sahlaysa dhaqdhaqaaqa xamuulka, ay tahay dariiqa iyo gaadiidka labadaba, waxayna si joogto ah ugu xiran tahay terminaalka, taas oo sahlaysa kaydinta xamuulka. Habkani waxa uu ka dhigayaa habka kaliya ee gaadiidka ee aan u baahnayn wax alaab ah ama alaabta la macaamilayo. Marka la eego xaqiiqda ah in kaabayaasha dhuumaha dhuumaha ay yihiin kuwo aad u culus iyo in ay leedahay cimri dheer oo aan horay loo arag, gaadiidka dhuumaha qaada ayaa ku raaxaysanaya heerka ugu sarreeya ee dhaqaalaha miisaanka dhammaan noocyada gaadiidka. Dhaqaalahani waxa uu hoos imanayaa oo waaraya heerarka sare ee baahida. Sidoo kale waa habka kaliya ee gaadiidka xamuulka ah ee aan hawshu u baahnayn dib-u-noqosho, taas oo kharashka wadajirka ah ee socodka madhan awgeed laga fogaado. Gaadiidka ganacsiga ee saliidda cayriin iyo batroolka ee dhuumaha qaada iyo maalgashiga cusub ee la filayo ee habkan gaadiidka ayaa ah mid si weyn looga dareemay Koonfur Afrika.
Xisaabinta Qulqulka Walxaha (MFA) ayaa bixisa qaab wax looga qabto maareynta kheyraadka oo lagu qiyaaso saameynta guud ee deegaanka, labadaba iyo ku meel gaarba. Warqadan, qulqulka ugu weyn ee wareegga nolosha oo dhan ee zinc waxaa lagu baaray qaaradda Afrika bartamihii 1990-meeyadii; Kuwaas waxaa ka mid ah wax-soo-saarka, samaynta iyo wax-soo-saarka badeecooyinka qayb ahaan iyo kuwa dhammaatay, isticmaalka, iyo nidaamka maareynta qashinka. Marka loo eego qaabka socodka zinc ee lagu soo saaray warqaddan, qiyaastii 236 Gg zinc (236 000 metric ton) ayaa laga soo saari jiray Afrika sannadkii. Wadarta qulqulka zinc ee alaabta la dhammeeyey ee la isticmaalayo ayaa ka badan socodka zinc ee alaabta la tuuray xaddi badan. Kala duwanaanshahan, qiyaastii 0.17 kg Zn/(capita.yr) celcelis ahaan, ayaa lagu daraa kaydadka la isticmaalo, inta badan codsiyada galvanizing ee dhismaha gudaha. Ilaa 55% dhammaan zinc la tuuray (marka laga reebo qashinka macdanta) ayaa dib loo warshadeeyay. Inta badan zinc-ka haray ee la tuuray waxaa lagu milmay durdurro qashinka kale ah, halkaas oo soo kabashada iyo dib-u-warshadaynta aysan suurtogal ahayn dhaqaale ahaan macquul ah.
Habaynta wareegyada ee baabuurta kaas oo matoor koronto lagu xidhi karo isha danabka ah, xidhiidhku waxa uu ku yaalaa khadka isku xidha ee mishiinka korantada oo u dhaqaaqa xaalad xidhan, oo sidaas awgeed shid curiyaha nalka, marka korantadu matoorka dhaqaaqa. Natiijo ahaan, matoorka korontada ayaa lagu tijaabin karaa si gaar ah oo fudud marka la eego farsamada wareegga.
Unug jiidaya baabuurta oo ka kooban matoor koronto oo ka shaqeeya shafka wadista baabuurka oo ka kooban matoor gubanaya oo ka shaqeeya shafka matoorka korantada iyada oo loo sii marayo xidhidhka goynta ee la bedeli karo. Xariiqda wadista ee u dhaxaysa mishiinka korontada iyo usheeda dhexe ee gaadhiga, gudbinta gacanta
Bilawga korantada ee matoorada gubashada gudaha, bilawga oo ay ku jiraan xiriiriyaha korantada ee saameynaya barokaca axial ee pinion ee u dhexeeya booska nasashada iyo booska shaqada, oo lagu garto in xiriiriyaha korantada uu ku jiro hal dabaylo, kaas oo dabaysha ay ku xiran tahay mid ka mid ah darafyadiisa. Bilawga bilawga iyo dhamaadka kale burushka caawinta kaas oo danabku ku kala duwan yahay inta u dhaxaysa qiime eber ah marka danab la keeno dabaysha bilawga waxa uu ku xidhan yahay, iyada oo la adeegsanayo xidhiidhiyaha korantada, iyo batteriga bilawga ah.
Aaladda bareegga ee baabuurta oo leh xubin koronto-joojin dhaqaaqi karta oo ka sameysan suuf ka sameysan sidii kabaal lagu leexiyay bireega jirka oo la qabsaday marka hore dhaq-dhaqaaq qaraabo ah oo soo jiidanaya marka loo eego jirka jihada uu u kicinayo badinta by darawalka baabuurka ilaa laga gaadho meel uu ku xidho kabaalka si wadajir ah wareeg ah oo leh jirka badelka ka dibna dhaqdhaqaaqa wadajirka ah ee kan dambe, dhaqdhaqaaqa pivoting ee jirka oo soo saara saamaynta braking makaanik.
Daraasadani waxay qiyaasaysay saamaynta mustaqbalka gaadhi koronto (EV) ku leeyahay kharashka ugu yar ee korantada ee Koonfur Afrika (RSA). Tan waxa la sameeyay iyada oo la fulinayo kobcinta awoodda jiilka sannadka 2040. Waxaa la qiyaasayay in ay jiri doonto 2.8 milyan EVs marka la gaadho 2040, oo lagu wargeliyo qiyaasaha caalamiga ah.Cabbirka tamarta korantada ee baabuurta konfur Afrika. Laba xaaladood oo dallacaadda EV ah ayaa la tijaabiyay, mid la adeegsanayo muuqaal dallacaad go'an oo la isku daray oo ku salaysan suugaanta jirta iyo mid kale halkaasoo dalabka dallacadu uu hagaajiyay nidaamka korantada ee ku salaysan qiimaha ugu yar. Natiijadu waxay muujisay in awood dheeraad ah loo baahan yahay si loo daboolo baahida. Labada xaaladoodba, tignoolajiyada maalgashiga awoodda ugu yar ee la doortay waxay ahaayeen isku mid, in kasta oo tirooyinku kala duwan yihiin. Tani waxay tusinaysaa in doorashada tignoolajiyada ugu jaban ay ku adagtahay muuqaalada dallacaadda.
Baahida tamarta ee sii kordheysa ee aduunka waxay keentaa cadaadis badan oo ku yimaada deegaanka iyo kheyraadka loo isticmaalo sahayda tamarta. Si loo hubiyo nidaam tamareed oo joogto ah, la isku halayn karo oo saaxiibtinimo leh, adduunku wuxuu bilaabay inuu horumariyo teknoolojiyad kale oo ay ku jiraan muraayadaha sawir-qaadista, marawaxadaha dabaysha iyo unugyada shidaalka hydrogen. Unugga shidaalka hydrogen oo lagu daray baytariyada ayaa sidoo kale loo adeegsaday gawaarida korontada ku shaqeysa si loo yareeyo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo cadaadiska saliidda ceyriinka ah. Si kastaba ha ahaatee ma jiro wax xakameyn ah oo lagu dabaqay ilaha tamarta kala duwan ee nidaamka gaadiidka korontada. Mashruucani wuxuu diiradda saaray horumarinta kontaroole caqli-gal ah kaas oo go'aamin doona isha tamarta ee bixisa tamarta uu dalbanayo rarka. Ilaha tamarta waxaa ka mid ah unug shidaal hydrogen ah, baytari iyo awood sare. Culayska nidaamka waxa lagu sawiray culays elektaroonik ah iyada oo la isticmaalayo muuqaal cabbiran oo ah awoodda loo baahan yahay matoor elektaroonig ah oo lagu rakibi karo baabuur.
Maaddaama waaxda korontadu ay ku socoto dib-u-qaabaynta degdegga ah ee waddammada soo koraya, iyo tignoolajiyada iyo doorashooyinka shidaalka ay balaadhaan, fahamka saamaynta deegaanka ee doorashooyinka maalgashiga ayaa noqda mid aad muhiim u ah. Ujeedada warqadani waa in la balaadhiyo falanqaynta hore ee kharashyada dibadda ee koronto dhalinta Koonfur Afrika. Waxaan soo bandhigeynaa falanqeyn qiyaas ah oo ku saabsan saameynta wasakhowga hawada ee caafimaadka aadanaha, waxyeelada ka timaadda qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo, iyo kharashyada caafimaadka ee laga fogaado ee korontadu, iyo sidoo kale ka doodista saameynta kale si tayo leh. Qiyaasta dhexe ee wadarta kharashka dibadda waa R7.3 bilyan, ama 4.4 senti halkii unug ee tamarta dhuxusha laga dhaliyo. Marka la eego qiimaha korontada ee hadda jira, kharashyada dibadda ayaa ah qiyaastii 40 iyo 20 boqolkiiba tacriifadaha warshadaha iyo guryaha, siday u kala horreeyaan. Waxaan markaa ka wadahadleynaa xulashooyinka siyaasadeed ee wax looga qabanayo kharashyadan, oo ay ku jiraan canshuuraha, nidaamyada oggolaanshaha la iibsan karo, iyo qorsheynta kheyraadka isku dhafan, iyo sidoo kale ballaarinta ganacsiga tamarta gobolka iyo suurtagalnimada helitaanka maalgelinta isbeddelka cimilada.
Koonfur Afrika oo isbedelaysa waxaa sii kordhaya tartanka kheyraadka yar ee dib u dhiska bulshada, horumarinta dhaqaalaha iyo faa'iidooyinka deegaanka. Sidaa darteed waa muhiim in kheyraadka si wanaagsan loogu qoondeeyo hab-dhaqannada maaraynta wanaagsan. Maareynta tignoolajiyada ayaa loo arkaa inay door weyn ka ciyaareyso arrintan. Tani waxay si gaar ah u tahay raasamaalka iyo warshadaha degdega ah ee tignoolajiyada sida tamarta korontada. Warqadani waxay qeexaysaa saamaynta maaraynta tignoolajiyada ee tamarta weyn waxayna ka hadlaysaa sida kuwan wax looga qabanayo iyadoo la adeegsanayo Maareynta Tignoolajiyada (MOT). Qodobada go'aan qaadashada ee khuseeya iyo sifooyinka ururka ee MOT wax ku ool ah waa la tafatiray. Waxaa la soo gabagabeeyay in MOT ay tahay in ay noqoto qayb muhiim ah oo ka mid ah maareynta ganacsiga si ay kaalin weyn uga qaadato qeexidda jihada istaraatiijiga ah iyo waxtarka ganacsi ee urur kasta oo ku tiirsan tignoolajiyada.
Baahida koronto ee Koonfur Afrika ayaa la filayaa inay laba jibaarto 2020. Si loo helo jiilkan xamuulka ah iyo awoodda gudbinta waa in la ballaariyo. Warqaddu waxay eegaysaa saddex xaaladood oo mustaqbalka jiilka mustaqbalka. Xaalad kastaa waxay u baahan tahay barnaamij fidineed oo kala duwan. Warqaddu waxay xoogga saaraysaa baahida loo qabo hab isku dhafan oo ku wajahan qorsheynta ballaarinta jiilka iyo kaabayaasha gudbinta. Sababtoo ah fursadaha kala duwan ee gacanta, go'aamada ku saabsan warshad cusub ayaa la samayn karaa oo keliya marka la qiimeeyo kharashka buuxa ee dhaqaalaha iyo dhammaan sifooyinka muhiimka ah ee la dhammeeyo.
Baahida tamarta ee sii kordheysa ee adduunku waxay keentaa cadaadis badan oo ku yimaada deegaanka iyo kheyraadka loo isticmaalo sahayda tamarta. Si loo hubiyo joogtaynta, la isku halayn karo iyo nidaamka sahayda tamarta deegaanka u saaxiibka ah tignoolajiyada beddelka ah ayaa la sameeyay oo ay ku jiraan muraayadaha sawirkavoltaic, marawaxadaha dabaysha iyo unugyada shidaalka hydrogen. Unugga shidaalka haydaroojin oo ay weheliyaan baytariyada waxa loo isticmaalaa baabuurta korantada si loo yareeyo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo culayska saaran saliida cayriin. Si kastaba ha ahaatee ma jiro xakameyn wax ku ool ah oo lagu dabaqay ilaha tamarta kala duwan ee nidaamka gaadiidka korontada. Mashruucani wuxuu diiradda saaray horumarinta kontaroole kaas oo go'aaminaya isha tamarta ee bixisa tamarta uu dalbanayo rarka. Ilaha tamarta waxaa ka mid ah unug shidaal hydrogen ah, baytari iyo awood sare. Culayska nidaamka waxa lagu sawiray culays elektaroonik ah iyada oo la isticmaalayo muuqaal cabbiran oo ah awoodda loo baahan yahay matoor elektaroonig ah oo lagu rakibi karo baabuur. Natiijooyinku waxay muujiyeen in iyadoo la isticmaalayo kantaroolaha nidaamka matoorku uu shaqayn karo waqti ka dheer kantarool la'aan.
Ujeedada daraasadda ayaa ahayd in la baaro arrimaha saameeya oggolaanshaha macaamiisha da'da yar ee baabuurta elektaroonigga ah ee Koonfur Afrika. Habka aqbalida tignoolajiyada wax laga beddelay ayaa la qaatay si loo horumariyo qaabka fikradda cilmi-baarista ee loo isticmaalay in lagu tijaabiyo xidhiidhada la mala awaalay. Cilmi-baadhistu waxay eegtay saamaynta faa'iidada la dareemay ay ku leedahay kalsoonida iyo qiimaha la dareemay. Intaa waxaa dheer xiriirka ka dhex jiri kara qiimaha la dareemayo iyo kalsoonida ayaa sidoo kale la qiimeeyay. Ugu dambeyntii saameynta kalsoonida, qiimaha iyo khatarta la dareemayo ee ku aaddan ujeedka suurtagalka ah ee isticmaalka baabuurta korontada ayaa la baaray. Daraasadu waxa ay ahayd mid tiro ahaan dabiici ah oo 380 sahan ay iskood u maamuleen ka qaybgalayaasha diyaarka ah ee lagu soo xulay muunad ixtimaalka ah ee Jaamacadda Witwatersrand. Si loo falanqeeyo xogta cilmi-baarista habka qaabaynta isla'egta qaabdhismeedka ayaa la qaatay iyadoo AMOS 23 iyo SPSS 23 laga faa'iidaysanayay. Natiijooyin muhiim ah oo daraasaddan lagu sameeyay ayaa daaha ka qaaday in faa'iidada baabuurta korontada ku shaqeysa ay si togan ula xiriirto qiimaheeda iyo kalsoonida la dareemay.
Koonfur Afrika waa waddan ku dhex jira isbeddellada. Isbeddellada siyaasadeed ee dalka ka jira, iyo awood-siinta dadka madowga ah ee aqlabiyadda ah, ayaa abuuray xaalad loo baahan yahay horumar la taaban karo oo lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo awoodo in uu daboolo baahiyaha dhammaan dadkiisa tobanka sano ee soo socda. Iyadoo inta badan ay sabab u tahay cunaqabateynta caalamiga ah ee la saaray Koonfur Afrika xilligii midab takoorka, ayaa dowladda Koonfur Afrika waxay si weyn ugu lug yeelatay qaybta tamarta ee dalkaas. Ku lug lahaanshahan waxaa ka mid ahaa horumarinta barnaamijka synfuels, kontaroolada qiimaha qaybta saliidda, monopolies ee qaybaha saliidda ee kor iyo hoosba, iyo shirkad koronto oo dhexe oo xooggan. 1994, Koonfur Afrika waxay noqotay xubintii kow iyo tobnaad ee Ururka Horumarinta Bulshada Koonfurta Afrika (SADC), oo ah urur la aasaasay 1980 si ay u mideeyaan qorshayaasha horumarineed ee dalalka xubnaha ka ah. SADC waxay hadda ka shaqaynaysaa si ay u dejiso qorshe horumarineed oo tamarta gobolka ah, iyo iskudubarid macluumaadka farsamada iyo baahida cilmi-baarista wadajirka ah.
Gaadhigan Korontada ah ayaa loo qaabeeyey, si uu u helo masaafo dhan ilaa afar boqol oo mayl, marka la barbar dhigo korontada hadda jirta, oo gaadha masaafo dhan afartan mayl oo kaliya, waxaanu gaadhigan Korontadu ku socdaa xawaare dhan lixdan mayl saacaddii, marka la barbar dhigo afartankii laga helay baabuurtan oo kale. Asal ahaan, waxay ka kooban tahay matoor yar oo kaxeeya koronto-dhaliyaha DC-ga, kaasoo sahayda hadda si uu ugu kaxeeyo mootada baabuurka. Waxa kale oo ka mid ah baytariyada, kuwaas oo laga caawiyo buuxinta wakhtiga ay ku jiraan bangiga unugyada cadceedda, kaas oo soo saara koronto ka soo baxa fallaadhaha qorraxda iyo iftiinka kale.
Daabacaadda ayaa ka kooban faallooyin ku saabsan mustaqbalka wadista baabuurta. Nuxurka horumarinta darawallada korantada iyo gaar ahaan dhismaha baabuurta korontada ayaa la soo bandhigay. Xiisaha baabuurta ay ku shaqeeyaan matoorada korontadu, inkastoo aan la is weydiin karin muddada dheer ee baabuurta leh matoor gubasho gudaha ah, ayaa sii kordhaya. Tan waxa u sabab ah wacyiga bulshada oo sii kordhaya ee ku saabsan arrimaha hoos u dhaca khayraadka shidaalka iyo wasakhowga deegaanka ee ay sababaan matoorada gubashada gudaha. Horumarinta farsamada elektiroonigga ah ee la xidhiidha kombuyuutarku waxay siinaysaa naqshadeeyayaasha baabuurta dhul ballaadhan si ay u horumariyaan fikradda mishiinka korontada. Baahida suuqa ee isku mar ah ee baabuurta leh qiiqa ugu hooseeya ee suurtogalka ah, baabuurta korantada ayaa xiiso ka helay suuqa ganacsiga, qiimaha warshadahan iyo saamiga boqolkiiba ee suuqa baabuurta ayaa si tartiib tartiib ah u kordhaya.
Sida ay u kala horreeyaan, matoor la jaanqaadi karo oo leh marsha dixirigu, oo ka kooban usheeda dirxiga ee usheeda rotor-ka oo lagu fidiyay qayb guri-geyneed oo ka kooban qayb guri-guri ah oo koronto ah, iyo isku-xidhka giraangiraha Gooryaanka oo ku yaala qaybta guryaha ee gear-guryaha , si ay suurtogal u noqoto in la sameeyo iyada oo aan shaabad la'aan ahayn kan dambe ee ka soo horjeeda qoyaanka dibadda, giraangiraha dirxiga oo ka samaysan caag POM ah oo leh caag POM ah oo isku dhafan oo isku dhafan ayaa la bixiyaa; iyadoo saamiga admixture ee ku dhawaad ​​20% -50%, faa'iido is-quful inta u dhaxaysa giraangiraha gooryaanka iyo usheeda dhexe ee gooryaanka la dammaanad qaadi karaa, xitaa in ka badan waqtiyada hawlgalka dheer, at xaglaha garoonka caadiga ah ee usheeda dhexe dirxi .
Matoorku waxaa lagu gartaa in uu ka kooban yahay ugu yaraan hal flange oo isku dhafan oo leh usheeda dhexe ee mootada waxaana la siiyaa hab lagu xareeyo oo lagu hayo baakidhka birta-birta ah ee rotor-ka, flange-ga iyo dhex-dhexaadinta iyo haynta macnaheedu waa in loo habeeyey marka loo eego usheeda dhexe ee mashiinka sida si looga tago meel bannaan oo ka mid ah jirku oo awood u siinaya qalabka dhimaya ama xajinta korantada in la dejiyo. Hal-abuurka hadda wuxuu helay codsi loogu talagalay gawaarida korontada ku shaqeeya.
Soo-saareyaasha loo isticmaalo baabuurta korantada ee wax-soo-saarka ku jira ilaa hadda waxay leeyihiin faa'iido darrada tiro xaddidan ee wareegyada lacag-qaadista (kumbuyuutarrada-ashitada-lead) ama qiimaha iibsiga sare (NiMH, Li-Ion) iyo muddada dheer ee soo-bixinta buuxda. Warqadani waxay soo bandhigaysaa daraasad ku saabsan xalka lagu kordhinayo wareegga nolosha ee xirmada caadiga ah ee batteriga ee loo isticmaalo codsiyada baabuurta iyadoo dib loo soo celinayo tamarta hoos u dhigista (xakamaynta korontadu) iyo kaydinta batariyada Electrochemical Double-Layer Capacitor (EDLC). Qalabka elegtarooniga ah ee lagu magacaabo Start Soft Stop (SSS) waxa uu u ogolaanayaa in la xakameeyo tamarta lagu kala qaado matoorka korontada, oo ay ku jiraan marxaladaha bilowga iyo joogsiga. Habka loo isticmaalo waxa uu leeyahay faragelinta ugu yar ee korantada sababtoo ah wareejinta qalabka semiconductor-ka marka uu marayo koronto eber ah. EDLC waxay ogolaataa kaydinta degdega ah iyo sii deynta tamarta 300-400A haddii loo baahdo iyada oo aan la isticmaalin tamarta ku kaydsan nidaamka batteriga.